Wararka - 2020 OTAO Party Annual Party oo la qabtay Janaayo 20th
Markii uu dillaacay cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' bilowga sanadka, dhammaan waddammada ayaa si adag u xakameeya soo gelitaanka dadka, taas oo si ba'an u saameysa ganacsiga caalamiga ah. Joojinta joogtada ah ee bandhigyada qadla'aanta, mugga iibka ee macaamiisha tafaariiqda qadka ayaa aad hoos ugu dhacay, waxqabadka alaab-qeybiyeyaasha qaar ayaa hoos udhacay, xitaa warshadaha kaladuwan waxay kujireen niyad jab aad u daran. Shirkadaha qiyaaso kaladuwan ayaa sidoo kale musalafay hoos udhaca iibka dalabka.
OTAO waxay leedahay koox dhalinyaro ah oo ku dhiirata inay si adag u shaqeeyaan lana kulmaan caqabada. Xaaladaha faafa, kooxda OTAO waxay si joogto ah u fikiraan oo ay raadiyaan habab badan waxayna abuuraan mucjisooyin waxqabadka iibka ah, taas oo ka dhigaysa shirkadu inay si joogto ah u cusbooneysiiso diiwaanka iibka isla markaana naga dhigto mid ka baxsan goobta ilaalinta shaashadda.
Bishii Janaayo 20-keedii, OTAO Annual Party waxaa lagu qabtay Liuyue Hotel, Magaalada Shenzhen. Xaflada oo dhami waxay ahayd mid xiisa badan oo diirran. Xaflada ayaa lagu soo gabagabeeyay bandhig faneed, abaalmarino, khudbadii maamulaha guud ee OTAO iyo xafladii cashada.
Mudane Andy, Maareeyaha Guud, wuxuu yiri: “Sannadkii 2020-ka, deegaanka ganacsiga ajaanibta aad uma fiicneyn. Waxay ahayd shaqo adag in la sameeyo ganacsade ajnabi ah adduunka oo dhan. Sanadka 2021, wax waliba waa bilow cusub; tallaalka waxaa laga bilaabaa wadamada oo dhan talaabo talaabo. Waxay noqon doontaa caqabad dheeri ah, laakiin dhammaanteen waxaan haysannaa kalsooni aan kaga gudubno dhibaatada, oo aan gaarno meel sare oo cusub. ”
Sida Dib Loogu Arkay 2020, OTAO waxay sii wadaysey koritaanka iyo horumarka. Dhamaanteen waxaan sameynay dadaalkeena si aan nolosha u wanaajino. Dhammaan Xubnaha marwalba way xusuusan doonaan himilada, waxayna si adag u shaqeyn doonaan si loo hubiyo in la gaarsiiyo alaabada tayada leh ee ilaaliyeyaasha shaashadda.
Abaalmarinta kadib waxay socotay. Jawigu wuxuu ahaa mid kacsan oo xiiso leh, inbadan oo kamid ah asxaabteena ayaa helay abaalmarinta cajiibka ah. Waxay ahayd xaflad casho diiran oo iswaafajsan xubnaheena kooxda, dhamaanteenna waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican inaan 2021 uga dhigno sanad wanaagsan.